Ivandry : Lafarinina efa simba 26 taonina mbola saika amidy -
AccueilRaharaham-pirenenaIvandry : Lafarinina efa simba 26 taonina mbola saika amidy
Tsy kely làlana ireo mpandraharaha mpanao hosoka. Sarona teny amin’ny toeram-ponenana iray teny Ivandry ny 7 marsa lasa teo ny lafarinina efa simba, 26 taonina, nefa mbola nokasaina amidy sy aparitaka tany amin’ireo mpanao mofo. Hetsika nataon’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana no nahatrarana izany tao amin’ny teoram-ponenana iray mandomando sy bobongolo teny Mahatony. Sarona tamin’izany ny lafarinina mamotaka na mivaingana sy feno lomotra, 32 gony amin’ny 50kg, mitondra ny marika « Lermiflour ». Vokatra izay tsy azo hanina intsony na ho an’ny olombelona, na ho an’ny biby. Ampandalovin’izy ireo ambony sivana ireo lafarinina efa simba ireo, ary averina indray ao anaty gony misy soratra « Miakabotraka », ary alefa any amin’ireo mpanao mofo eto an-drenivohitra.
Ara-dalàna ny nivoahan’ireto lafarinina ireto tany amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, satria dia nahazo ny taratasy fanamarihana ny vokatra azo jifaina ara-dalàna. Ny fomba fitehirizana azy ireto araka izany no heverina fa nanimba ny vokatra, ka izao fanivanana sy famadihana azy anaty gony hafa izao no hitan’ny mpandraharaha tompon’ny entana fa hivarotana ireto lafarinina ireto.
Manoloana izany hosoka eo amin’ny sakafo ho an’ny mponina izany, dia nandray ny andraikiny avy hatrany ny teo anivon’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana. Notanana vonjimaika ireo tompon’andraikitra tamin’ny fanaovana ny hosoka, ary hodorana ireo vokatra simba milanja 26 taonina ireo.
Nampitandrina ireo mpandraharaha hafa mihoa-pefy amin’ny fanaovana hosoka toa izao ny minisitera, ary mampirisika ny mpanjifa hampandre ny minisitera raha misy ny tranga mampiahiahy. Araka ny lalàna dia lamandy sy fitazonana am-ponja no sazy miandry ireo tompon’andraikitry ny hosoka toa izao.
Nogiazana ihany koa io toeram-ponenana io, izay nahitana lafarinina efa voavadika amin’ny gony « Miakabokatra » 21 gony, Lafarinina marika « Lermiflour » 480 gony, lafarinina 95 gony eo an-dalam-panovana, lafarinina « Lermiflour » efa maloto 32 gony, gony 17, sivana 2, ary kofehy ho an’ny gony 1.
Mazava ny vina politikan’ny filoham-pirenena omaly nandritra ilay hetsika ho an’ny fisandratana teny amin ny lapam-panjakana Iavoloha, ho azy dia ho an’ ny Malagasy ny fisandratana ka ilay ampahafantarina ny rehetra “ mila vision lavitra ...Tohiny